အချစ်ဆုံးသူမ အလှဆုံးသူမ | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂
သူမဘ၀ကို အလှဆင်ကြစို့။ ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ	Comments are closed.
ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)	အောင်ဝေး -ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က်	ဆောင်းလူ - သူမနှင့် ဘ၀ ...	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ဖိုးထက် - လူပါးဝသော စာအုပ်	ကာတွန်းအောင်မော် - သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်	ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်	ကိုသစ် (သီတဂူ) - ရေသန့်၊ လူသန့်၊ စိတ်မသန့်တသန့်	မြဒေါင်းနွယ် - သူမ၏ ချစ်သူ	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများလူသားတစ်ဦးသည် တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ထက်ပင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရံှု့းနေပြီလား.... (aung khaing myint)
ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) ငှက်ခါးလေး တွေ စာလွှာပါးတော့
နေလင်းညီ - အသီး သီးသော သရက်ပင်များ ဖြစ်ဖို့ …
Eaint Khaing Oo - The hand god sent
စာပဒေသာ ကောက်စာများ ရဲရင့်သက်ဇွဲ - ကမ္ဘာလည်း မကြေ ဥဒါန်းလည်းမကျေ ....
မသုဉ်းတဲ့ ... သုံး
သက်ခိုင် - ပုတ်သင်ညိုအကြီးစား၊ ဖားမစား အောင်ဖေနဲ့ ကံဆိုးတဲ့တောကြောင်
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (203)
ကာတွန်း – အောင်မော် (65)
ကာတွန်း ATH (62)
Cartoon Box (1,545)
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent CommentsAshinwin on ကာတွန်းအောင်မော် – သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်Dr. Zhivaka(Kambawza) on မောင်တူး – သက်ရှိပန်းချီ – အပိုင်း (၁၇)aye kyaw on မောင်သာမန် – အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်းမြင့်မောင် on ဖိုးထက် – ဟစ်တလာကို မေတ္တာပို့ရလေသည်hla myint. on ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း)သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ